Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaliya Shariif Xasan iyo waxgaradka beelaha Digil iyo Mirifle ee ku dhaqan Puntland oo kulan ku yeeshay Garoowe. – Radio Daljir
Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaliya Shariif Xasan iyo waxgaradka beelaha Digil iyo Mirifle ee ku dhaqan Puntland oo kulan ku yeeshay Garoowe.
Garoowe,Dec,25 -Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo waxagardka kasoo jeeda beelaha Digil iyo Mirifle ee ku dhaqan magaalada Garoowe ayaa maanta kulan ku yeeshay magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland.
Kulakaan oo kadhacay hotelka Ruqsan Square ee magaalada Garoowe ayaa la xiriiray u kuurgalida eedaymo kasoo yeeray xildhibaano iyo siyaasiyiin kasoo jeeda gobolada Bay iyo Bakool oo tilmaamayay in dadka kasoo jeeda beelaha Digil iyo Mirifle lagu dhibaateeyo gudaha deegaanada Puntland.
Kulankan oo ahaa mid albaabada u xirnaa oo ay saxaafadda dibadda ka joogtay,ayaa markii uu soo dhamaaday waxaa saxaafadda uga warbixiyay waxyaabihii kulankaan looga hadlay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan.
Gudoomiyaha ayaa sheegay dadkii uu kulamada la qaatay oo kasoo jeeday beelaha Digil iyo Mirifle iyo beesha Jareerwayne inay u sheegeen inaysan jirin wax dhibaato ah oo ay kala kulmeen maamulka Puntland.
“Ma jirto dhibaato wayn oo ay inoo sheegeen dadkii aan la kulanay,waxa ay noo sheegeen inay jirto qof la xiray iyo qof kantorool lagu xiray, taasna meel ay dowlad ka jirto maalin waliba waa inay jirtaa hadii ay taasi dhici wayso dadka makala dambeynayo”ayuu yiri Gudoomiyaha baarlamaanka Shariif Xasan oo ugu baaqay shacabka Puntland iyo beelaha Digil iyo Mirifle inay si wadajir ah isaga kaashadaan adkeynta nabadgalyada.
Gudoomiye Shariif Xasan ayaa dhawaan ka qaybgalay shirkii wadatashiga ee wajigiisa labaad lagu soo gabagabeeyay shalay magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland,waxaana uu si wayn uu ugu mahadceliyay shacabka iyo dowladda Puntland oo uu ku amaanay inay ka shaqeeyeen amaanka islamarkaana ay dad badan mart galiyeen.